Sechokwadi seicho chingangodaro chakataridzika, Sacha Baron Cohen akakwanisa kumisikidza mukadzi anodadisa mu wiricheya pamberi pekutaura kwake kwekubvuma. Anogona kuonekwa kushandisa wake wekufambisa rubatsiro sechibvumirano. Paanenge achifamba-famba pachikuva, anogumburwa. Zvinoita sekunge ari kuedza kuzvidzivirira kubva pakuwa uye iye pushes mukadzi abva pachikuva. Akaita sekushamisa kwechokwadi vateereri vazere nevanhu vanozivikanwa saGeorge Clooney naKathryn Bigelow. Ichi chaive chimwe chema pranks ake, ndinofungidzira "Dictator" na "Borat" zvaive zvisina kukwana kuna Sacha Baron Cohen.
[btn link = "http://www.cinemablend.com/new/Watch-Sacha-Baron-Cohen-Knock-An-Woman-hwiricheya-Off-Stage-40246.html "color =" orange "] Verenga Chinyorwa Chizere [/ btn]